italy - Synonyms of italy | Antonyms of italy | Definition of italy | Example of italy | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for italy
Top 30 analogous words or synonyms for italy
Math rock နှင့် Uzeda (Italy)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ 8. Marisa Bellisario Price Italy 1992
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ 28. The Freedom of the City Aversa, Italy 1995
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ 47. Honorary Citizenship of Rome (Italy) (May 23,1997) 1997
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် ရရှိခဲ့သည့် ဆုများ 23. The Freedom of the City Commune of Giugliano, Italy 1993
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာ တခြား သာသနာပြု အသင်းဂိုဏ်းတွေမှာ တောင်ကြီး၊ ကျိုင်းတုံဒေသကို Italy နိုင်ငံက PIME (ခေါ်) နိုင်ငံရပ်ခြား သာသနာပြုအသင်းဂိုဏ်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် Ireland နိုင်ငံက St. Columban အသင်းဂိုဏ်း။ ပုသိမ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ချင်းတောင်ကို MEP အဖွဲ့စသဖြင့် တာဝန်ယူ ကြသည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့များစွာလည်း ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
ပေါင်လို ဂျင့်ထိလွန်းနီ အမြဲတမ်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပီးယာ လူးဝီဂီ ဘာဆနီ ဦးဆောင်သော လက်ဝဲမယိမ်းတယိမ်း(Centre-left) အီတလီညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့(coalition Italy. Common Good)၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ်၊ ၂၀၁၃ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝန်ကြီးအဖွဲ့(The Chamber of Deputies)၌ ပါဝင်ရန် ထပ်အရွေးခံရသည်။
ငလျင်လှုပ်ခြင်း နှစ်စဉ်ငလျင်လှုပ်သည့် အကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်၊ ၁၀၀,၀၀၀ မှာ အမှန်တကယ် သိရှိခံစားနိုင်သည်။အသေးစားငလျင်လှုပ်ခြင်းများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာများဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုရှိ California (ကယ်လီဖိုးနီးယား)နှင့် Alaska (အလက်စကား)၊ Guatemala (ဂွာတီမာလာ)၊ Chile (ချီလီ)၊ Peru (ပီရူး)၊ Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား)၊ Iran (အီရန်)၊ Pakistan (ပါကစ္စတန်)၊ Portugal (ပေါ်တူဂီ)ရှိ Azores (အေဇိုးရီး(စ်))၊ Turkey (တူရကီ)၊ New Zealand (နယူးဇီလန်)၊ Greece (ဂရိ)၊ Italy (အီတလီ)နှင့် Japan (ဂျပန်)တို့တွင် အမြဲတမ်းနီးပါးဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ငလျင်များသည် New York City (နယူးယောက်စီးတီး)၊ London (လန်ဒန်)နှင့် Australia (ဩစတြေးလျ) အပါအဝင် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။